SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Ashaninka Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Karo) Batak (Toba) Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Emberá (Northern) Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Galician Georgian German Greek Guambiano Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Maya Motu Mutauro Wemasaini WekuJamaica Mutauro Wemasaini wechiBelgian French Mutauro Wemasaini wechiChinese Mutauro Wemasaini wechiCzech Mutauro Wemasaini wechiDutch Mutauro Wemasaini wechiFrench Mutauro Wemasaini wechiGreek Mutauro Wemasaini wechiPortuguese Mutauro Wemasaini wechiQuebec Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wechiSwiss German Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuAustria Mutauro Wemasaini wokuBolivia Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuBritain Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuCosta Rica Mutauro Wemasaini wokuCroatia Mutauro Wemasaini wokuCuba Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuEl Salvador Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuGhana Mutauro Wemasaini wokuGuatemala Mutauro Wemasaini wokuHonduras Mutauro Wemasaini wokuHungary Mutauro Wemasaini wokuIndia Mutauro Wemasaini wokuIndonesia Mutauro Wemasaini wokuIreland Mutauro Wemasaini wokuIsrael Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuKenya Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMadagascar Mutauro Wemasaini wokuMalawi Mutauro Wemasaini wokuMalaysia Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuMozambique Mutauro Wemasaini wokuNew Zealand Mutauro Wemasaini wokuNicaragua Mutauro Wemasaini wokuNigeria Mutauro Wemasaini wokuPanama Mutauro Wemasaini wokuParaguay Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPhilippines Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuSlovakia Mutauro Wemasaini wokuSlovenia Mutauro Wemasaini wokuSouth Africa Mutauro Wemasaini wokuSweden Mutauro Wemasaini wokuTaiwan Mutauro Wemasaini wokuThailand Mutauro Wemasaini wokuUruguay Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Mutauro Wemasaini wokuZambia Mutauro Wemasaini wokuZimbabwe Myanmar Navajo Nepali Nias Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Pennsylvania German Persian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Singapore Sign Language Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Torres Strait Creole Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Uzbek Uzbek (Roman) Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Xavante Xhosa Yoruba Zulu
Shongwe yeBhabheri (1-4)
Jehovha anovhiringidza mutauro (5-9)
Kubva kuna Shemu kusvika kuna Abramu (10-32)
Mhuri yaTera (27)
Abramu anobuda muUri (31)
11 Nyika yese yakanga iine mutauro mumwe chete uye ichishandisa mashoko akafanana.* 2 Pavaifamba vakananga kumabvazuva, vakawana bani munyika yeShinari,+ vakatanga kugara imomo. 3 Vakatanga kutaurirana vachiti: “Uyai tikanye zvidhinha, tozvipisa nemoto.” Saka vakashandisa zvidhinha panzvimbo pematombo, uye bhitumini ndiyo yaiva dhaka ravo. 4 Vakabva vati: “Uyai tizvivakire guta uye shongwe inosvika kudenga, tizviitire zita rakakurumbira, kuti tisapararire nenyika.”+ 5 Jehovha akabva aburuka kuti aone guta racho neshongwe yacho zvakanga zvavakwa nevanakomana vevanhu. 6 Jehovha akabva ati: “Ona! Vanhu ava vamwe chete, vane mutauro mumwe chete,+ uye izvi ndizvo zvavatanga kuita. Saka hapana chavangafunga kuita chavachatadza. 7 Uya tiburuke+ tinovhiringidza mutauro wavo kuti varege kunzwanana mitauro yavo.” 8 Saka Jehovha akavaparadzira nenyika yese+ vachibva ipapo, uye vakarega kuvaka guta racho zvishoma nezvishoma. 9 Ndokusaka rakatumidzwa kuti Bhabheri,*+ nekuti Jehovha akavhiringidza mutauro wenyika yese ipapo, uye Jehovha akavaparadzira nenyika yese vachibva ipapo. 10 Iyi ndiyo nhoroondo yaShemu.+ Shemu akanga aine makore 100 paakabereka Apakishadhi,+ uye Mafashamo akanga ava nemakore maviri apfuura. 11 Abereka Apakishadhi, Shemu akararama mamwe makore 500. Uye akabereka vanakomana nevanasikana.+ 12 Apakishadhi akararama makore 35, achibva abereka Shera.+ 13 Abereka Shera, Apakishadhi akararama mamwe makore 403. Uye akabereka vanakomana nevanasikana. 14 Shera akararama makore 30, achibva abereka Ebheri.+ 15 Abereka Ebheri, Shera akararama mamwe makore 403. Uye akabereka vanakomana nevanasikana. 16 Ebheri akararama makore 34, achibva abereka Peregi.+ 17 Abereka Peregi, Ebheri akararama mamwe makore 430. Uye akabereka vanakomana nevanasikana. 18 Peregi akararama makore 30, achibva abereka Reu.+ 19 Abereka Reu, Peregi akararama mamwe makore 209. Uye akabereka vanakomana nevanasikana. 20 Reu akararama makore 32, achibva abereka Serugu. 21 Abereka Serugu, Reu akararama mamwe makore 207. Uye akabereka vanakomana nevanasikana. 22 Serugu akararama makore 30, achibva abereka Nahori. 23 Abereka Nahori, Serugu akararama mamwe makore 200. Uye akabereka vanakomana nevanasikana. 24 Nahori akararama makore 29, achibva abereka Tera.+ 25 Abereka Tera, Nahori akararama mamwe makore 119. Uye akabereka vanakomana nevanasikana. 26 Tera akararama makore 70, achibva abereka Abramu,+ Nahori,+ naHarani. 27 Iyi ndiyo nhoroondo yaTera. Tera akabereka Abramu, Nahori, naHarani; uye Harani akabereka Roti.+ 28 Baba vake Tera vachiri vapenyu, Harani akafira munyika yaakaberekerwa yeUri+ yevaKadheya.+ 29 Abramu naNahori vakaroora. Mudzimai waAbramu ainzi Sarai,+ uye mudzimai waNahori ainzi Mirika,+ mwanasikana waHarani. Harani aiva baba vaMirika naIska. 30 Sarai aishaya mbereko;+ akanga asina mwana. 31 Tera akazotora Abramu mwanakomana wake nemuzukuru wake Roti,+ mwanakomana waHarani, naSarai muroora wake, mudzimai waAbramu mwanakomana wake, akabuda navo muUri yevaKadheya vakananga kunyika yeKenani.+ Vakazosvika kuHarani+ vakatanga kugara ikoko. 32 Mazuva aTera akasvika makore 205. Tera akazofira muHarani.
^ Kana kuti “iine mashoko mamwe chete.”
^ Kureva kuti “Kuvhiringidzika.”